Cheap Automatic Fatịlaịza mbukota Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Na ya "ngwa ngwa, zie ezi, kwụsie ike", na akpaka nkwakọ igwe nwere oke onu ogugu di elu na nkenke di nkpa, dakọtara na onye na-ebuli ihe na igwe ejiji iji mezue usoro ikpeazu na ntaneti nke fatịlaịza na azụmahịa na fatịlaịza.
Gịnị bụ Automatic Packaging Machine?
A na-eji Machine Packaging maka Fatịlaịza na pellet fatịlaịza, ezubere maka ịhazi ihe. Ọ gụnyere ụdị ịwụ abụọ na otu ụdị ịwụ. Igwe ahụ nwere njirimara nke usoro ihe eji arụ ọrụ, ntinye dị mfe, nhazi dị mfe, na oke ziri ezi dị elu nke dị n'okpuru 0.2%.
Site na "ọsọ ọsọ, nke ziri ezi ma kwụsie ike" - ọ bụrụla nhọrọ mbụ maka nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ na-emepụta fatịlaịza.
1. Nkwakọ ngwaahịa dị mma: kwesịrị ekwesị maka akpa akpa, akpa akwụkwọ akpa, akpa ákwà na akpa plastic, wdg.
2. Ihe: A na-eji igwe anaghị agba nchara 304 mee ihe na akụkụ kọntaktị nke ihe ahụ, nke nwere nnukwu nkwụsị nke corrosion.
Nhazi nke akụrụngwa akụrụngwa akpaaka
Automatic packing machine bụ ọgbọ ọhụrụ nke igwe nkwakọ ngwaahịa nwere ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara. Ọ kachasị na-etinye ngwaọrụ na-akpaka, na-ebufe ngwaọrụ, ịkwa akwa na nkwakọ ngwaahịa, njikwa kọmputa na akụkụ anọ ndị ọzọ. Utkpụrụ ịba uru nwere uru nke usoro ziri ezi, ọdịdị mara mma, arụmọrụ kwụsiri ike, nchekwa ike na ịdị arọ ziri ezi. Akpaaka akụrụngwa igwe makwaara dị ka kọmputa quantitative nkwakọ ọnụ ọgụgụ, isi igwe adopts ngwa ngwa, ọkara na-adịghị ngwa atọ-ọsọ nri na pụrụ iche nri inggwakọta Ọdịdị. Ọ na-eji teknụzụ ntụgharị ntụgharị dijitalụ dị elu, teknụzụ nhazi usoro na teknụzụ mgbochi nnabata iji chọpụta mmezi njehie na ndozi.
Ngwa nke Akpaaka Nkwakọ ngwaahịa
1. Nri nri: nkpuru, oka, oka oka, soya, osikapa, buckwheat, sesame, wdg.
2. Ngalaba fatịlaịza: nri nri, fatịlaịza organic, fatịlaịza, ammonium phosphate, nnukwu ahụ nke urea, porous ammonium nitrate, fatịlaịza BB, fatịlaịza phosphate, fatịlaịza potash na fatịlaịza ndị ọzọ agwakọtara.
3. Chemical edemede: maka PVC, PE, PP, ABS, polyethylene, polypropylene na ihe ndị ọzọ granular.
4. Nri nri: ọcha, shuga, nnu, ntụ ọka na ụdị nri ndị ọzọ.
Uru nke akụrụngwa na-akpaghị aka
(1) packaginggba ọsọ ngwa ngwa.
(2) Ọnụọgụ ọnụọgụgụ dị n'okpuru 0.2%.
(3) Integrated Ọdịdị, mfe mmezi.
(4) Na-ebugharị igwe eji eji akwa ya na ọnụ ọgụgụ sara mbara na oke ziri ezi.
(5) Nabata mbubata ihe na mbubata pneumatic actuators, nke na-arụ ọrụ na ntụkwasị obi ma na-echekwa ngwa ngwa.
Akụrụngwa nke Loading & Inye Nri igwe
1. Ọ nwere ikike ibu njem na ogologo njem ogologo.
2. Anụ na-arụ ọrụ nke ọma.
3. Ikike na ịrụ ọrụ na-aga n'ihu
4. Ogo nke hopper na ihe nlereanya nke moto ahụ nwere ike ịhazi ya dịka ikike.
Akpaka Packaging Machine Video Display
Akpaka Packaging Machine Model Nhọrọ
.Dị YZBZJ-25F YZBZJ-50F
Arọ arọ (n'arọ) 5-25 25-50
Ezigbo (%) ± 0.2-0.5 ± 0.2-0.5
Speed ​​(akpa / awa) 500-800 300-600
Ike (v / kw) 380 / 0.37 380 / 0.37
Ibu (n'arọ) 200 200
N'ozuzu Size (mm) 850 × 630 × 1840 850 × 630 × 1840
Nke gara aga: Na-adọnye & Ngwa Nri
Osote: Ugboro abụọ Hopper quantitative Packaging Machine